Kỹ thuật trồng Đu đủ cho trái to khỏe đẹp ít sâu bệnh | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Kỹ thuật trồng Đu đủ cho trái to khỏe đẹp ít sâu bệnh | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Kwi iindlela zokutyala ipapaya, kukho ingongoma ebaluleke kakhulu abantu abambalwa abayaziyo. Oko kukuthi, umthi wepapaya kuyo yonke inkqubo yokukhula ukuba uhlala uthambekele kwi-angle ye-45 degrees ngokumalunga nomgangatho wegadi. Emva koko kuya kuba neziqhamo kakhulu, isivuno siphezulu ngama-50-60% kunendlela yemveli ethe nkqo.
Ukongeza, le ndlela yokutyala ilula kakhulu ukuvuna, kulula ukuthintela izitshabalalisi kunye nezifo, kwaye incinci yophukile xa udibana nezaqhwithi. Ke ngoko, uFoo ucebisa ukuba ukuba utyala kakhulu, kufuneka usebenzise le ndlela.
Ukwaneleyo kulunge kakhulu kwimpilo, kuba isisityebi kwi-antioxidants, isekela ukulahleka kwesisindo, ikhusela ukuchithwa kwe-macular, ikhuthaza impilo yamathambo, ixhasa inkqubo yokugaya, ikhusela isifo senhliziyo, ikhusela isifo sikashukela, i-asthma, umhlaza …
Kweli nqaku, uFoo uya kukukhokela indlela yokukhulisa umthi wepapaya ukuze umthi ukhule usempilweni, uvelise iziqhamo ezininzi kunye nowona mgangatho ubalaseleyo!
1 Ixesha lokutyala i-papaya
2 Khetha imbewu yepapaya
3 Ukwenza umhlaba wokulima ipapa
4 Iindlela zokutyala iimbewu zepapaya
4.1 1. Ukufunxa imbewu
4.2 2. Ukwenza iimbiza zokutyala izithole
5 Ubuchwephesha bokukhulisa ipapaya
6 Khulisa imithi yepapaya
7 Ukuthintela izinambuzane kunye nezifo ze-papaya
8 Kuthatha ixesha elingakanani ukutyala ipapa ukuze uvelise iziqhamo?
9 Vuna iziqhamo zepapaya
Ixesha lokutyala i-papaya
Ixesha lonyaka yinto ebaluleke kakhulu echaphazela kakhulu isivuno sepapaya, ngoko yenze ngexesha elifanelekileyo ukugcina umthi usempilweni kwaye ukhula kakuhle.
I-Papaya inokuntywila kwaye ithwale isiqhamo unyaka wonke, kodwa kukho amaxesha onyaka anesiqhamo esincinci okanye angabikho. Ke ngoko, ukuze ukhulise i-papaya ngesivuno esikhulu, iziqhamo ezintle, kunye nolawulo lwezinambuzane, kufuneka utyale ipapaya kula maxesha alandelayo:
Umhlaba unokusebenza ekunkcenkcesheleni, ukukhulisa ipapaya ngexesha lemvula (ngoJulayi ukuya kuAgasti).
Amasimi anamanzi angasebenziyo (iindawo ezichatshazelwe zizikhukula) atyalwe emva kokuba amanzi ewuthile.
Xa utyala i-papaya, izithole kufuneka zikhule ukuya kwinqanaba leentsuku ezingama-20 ukuya kwi-30 ubudala.
Khetha imbewu yepapaya
Imbewu isetyenziselwa ukwenza indlela yokukhulisa ipapa zidinga iimpawu ezahlukileyo, iimfuno ezikhethekileyo zokuqinisekisa ukuba imbewu iyantshula ngokukhawuleza xa ihlwayelwa.
Khetha iziqhamo zepapaya ezivuthiweyo, unqumle umphezulu kunye nesiqu sesiqhamo, susa imbewu phakathi kwesiqhamo kwaye uyibeke emanzini, khetha imbewu emnyama kwaye uyitshonise phantsi kwamanzi, uhlambe ifilimu ye-viscous egubungela imbewu. .
Ziyeke zome emva koko uqhubeke nokuhlwayela kwangoko. Imbewu iya kuntshula ngokuthe ngcembe emva kweentsuku ezili-10 ukuya kwezili-15 kuphela.
Ungahlwayela iimbewu ezi-2-3 kwimbiza enye encinci ukunqanda ilahleko xa imbewu ingantshuli kakhulu, umonakalo wezinambuzane okanye ukuthena izityalo zepapaya eziyindoda.
Ukwenza umhlaba wokulima ipapa
Umhlaba wokulima ipapa kufuneka ulinywe nzulu, kwaye kufuneka ubhulwe ngebhedi enobude obungama-40 ukuya kuma-50 cm ngaphezu komsele womsele. Umgama phakathi kweebhedi uvela kwi-2 ukuya kwi-2.5 m, indawo yebhedi inobubanzi be-1.6 ukuya kwi-2 m (kwiindawo eziphantsi ezijongene nezikhukhula, ukuphakama kwebhedi kufuneka kube).
Umhlaba okwintsimi yokulima i-papaya uhlala ulinywa kwaye kufuneka uthabathe zonke iingcambu ze-papaya kwaye zomise ixesha le-1 ukuya kwiinyanga ezi-2.
Faka itoni e-1 yesichumiso esiphilayo kunye ne-0.3kg ye-Bosat/pole. Ukumba umgodi wokutyala ubukhulu be-60x60x30, phakathi kwebhedi, i-2m ngaphandle.
ipali nganye isityalo ipapaya ngoxinaniso lwemithi engama-80 ukuya kwengama-90, nikela ingqalelo ekutyaleni imithi kwimigca ethe nkqo nethe tyaba ukuze ibophe ngokulula ngokuchasene nokuwa kamva.
Izichumisi zendalo kufuneka zigalelwe umgquba, umgubo wekalika wokwenziwa kwelinen kufuneka ugalelwe ngokulinganayo kwaye uxutywe nomhlaba ukugrumba umngxuma phambi kokutyala ipapaya emngxunyeni.
Iindlela zokutyala iimbewu zepapaya
Kwi iindlela zokutyala ipapaya I-Fao idiliza ibe ngamanyathelo ama-4 aphambili, inyathelo ngalinye lihambelana nenqanaba. Ngalinye lala manqanaba lifuna ukuba ulandele iinkqubo eziyalelwa nguFao ukuqinisekisa ukuba umthi we-elm unempilo kwaye ukhula kakuhle.
1. Ukufunxa imbewu
Imbewu yepapaya yicwilise emanzini afudumeleyo kunye nomlinganiselo we-3 abilayo ama-2 abandayo kwiiyure ze-5, emva koko ufukamele imbewu kwingxowa ye-cotton efumileyo yeentsuku ezi-4 ukuya kwezi-5.
Xa imbewu iqhekeziwe yaza yantshula, iyahlwayelwa. Ngokukodwa kwimbewu yepapaya esulungekileyo (uhlobo abalimi abazenzela imbewu ngalo), ngelixa bentywila emanzini, kufuneka basuse yonke imbewu edadayo, bahluze imbewu entywiliselwe emanzini, bazise ukuba bafukame kwaye baqhubeke nokuhlwayela.
2. Ukwenza iimbiza zokutyala izithole
Sebenzisa iingxowa zeplastiki eziyi-8 x 5cm (kufuneka zigqobhoze imingxuma yokuhambisa amanzi). Thatha umhlaba we-alluvial okanye inyama elula, wenze umhlaba ube mncinane kakhulu, udibanise nomgquba obolileyo kwi-3: 1. Gcwalisa ingxowa ngomhlaba kunye nomxube womgquba.
Cinezela ngobunono imbewu embindini wengxowa yokugawula. Yahlula ngokulinganayo, imbiza nganye ihlwayela imbewu enye. Gquma ngomhlaba ocolekileyo. Beka ngobunono imbiza kwitreyi.
Shiya kwindawo epholileyo, ngaphandle kwemvula, ilanga namanzi ukugcina izityalo zifumile yonke imihla. Ukuba injongo yakho kukuvelisa izithole kwizinga elikhulu, kuyimfuneko ukuyila indlu enophahla lwemesh.
Xa umthi wepapaya ukhula ukuya kwinqanaba elinamagqabi okwenene ama-2 ukuya kwa-4, nkcenkceshela kanye ngeentsuku ezi-2. Lungisa i-canopy ukuze izithole zepapaya zibe nokukhanya okwaneleyo, izithole ezitsha zinokukhula ngokuthe tye kwaye zikhule kakuhle.
Rhoqo ukhuphe ukhula kwaye uthintele izinambuzane nezifo kwiimbiza zezithole.
Xa isityalo sikhula de sibenamagqabi okwenene ama-4 ukuya kwa-5, ubude bomthi ukusuka kwi-10 ukuya kwi-15cm bunokubazisa endle.
Ipapaya yaseTaiwan ivelisa isivuno esikhulu kunye nomgangatho weziqhamo ezilungileyo kakhulu. Kodwa ukuba yipopo engumxube, imbewu ekwisiqhamo ayinakusetyenziswa njengembewu kwezi zityalo zilandelayo.
Ubuchwephesha bokukhulisa ipapaya
Ixesha lokutyala: Qalisa ukutyala ngokwaneleyo kwisityalo sasentlakohlaza ukusuka ngoMatshi ukuya kuAprili Ixesha lokuvuna ipapaya ukusuka ngoSeptemba ukuya kuOktobha.
Ukuxinana kokutyala: Umgama phakathi kwemithi yi-1.5 x 1.5m (imithi eyi-120 / ipali).
Umngxuma wokutyala: Ubude, ububanzi, kunye nobunzulu ngokulandelelana 40 x 40 x 35cm.
Isalathiso sokutyala: Ukutyala i-papaya kwi-East-West direction. Injongo yeyokuba izityalo zepapaya zisebenzise ukukhanya kwelanga kwaye zandise iphotosynthesis.
Inceda ekwandiseni isivuno, umgangatho weziqhamo kunye nokwandisa ukuxhathisa ekuweni (kwiinduli zemithambeka yeentaba, isalathiso sokutyala ipapaya kufuneka sibe kwicala le-contour line).
Uwukhulisa njani umthi wepapaya: Sebenzisa imela ebukhali ukwenza ibala elincinane ukususa isigqubuthelo seplastiki (ungawaphuli igour). Beka ngobunono imbiza kunye nezithole ngokuthe tye emhlabeni kwicala leMpuma-ntshona.
Lima umhlaba ojikeleze imbiza. Gxuma iingcambu kunye namanzi ngokwaneleyo ukugcina isityalo sifumile. Emva kokutyala i-papaya, sebenzisa intonga ukuphakamisa umphezulu womthi ukuze i-papaya stem kunye nesiseko zihlale zithotywe kwi-angle ye-45 degrees ngokumalunga nomgangatho webhedi ukusuka ekutyaleni kude kube nokukhula komthi.
Ukukhula ipapaya encinci ifumana izigidi ezili-100 ngonyaka | VTC16
Khulisa imithi yepapaya
Ukuchumisa kuya kunceda umthi ukuba ukhule ngokukhawuleza, isiqhamo esimnandi kwaye esimnandi. Ngoko musa ukwenza umzamo wokuwenza ixesha elide, kodwa xa uvuna, uya kufumana isiqhamo esibi.
Ungalitsibi eli nyathelo ukuba ufuna ukonwabela iziqhamo zepapaya ezimnandi nezinevumba elimnandi ezenziwe ngezandla zakho.
Qhuba phambi kokutyala umngxuma ngamnye ngomxube we-0.5kg yomgubo wekalika kunye ne-5 ukuya kwi-7kg yesichumiso esibolileyo esibolileyo + 0.5kg ye-superphosphate kunye ne-0.2kg ye-potassium chloride.
Ukugqoka okuphezulu (okwenziwa ngemithi yepapaya efikelela kwinyanga eyi-1 ubudala): Zichumise ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezi-7, ubungakanani besichumisi 50gr NPK Buffalo head 16-12-8-11+TE/root.
Kwimithi yepapaya 1 ukuya kwiinyanga ezi-3 ubudala: rhoqo nge-15 ukuya kwiintsuku ze-20 / faka isichumiso kanye, umthamo: ukusuka kwi-70 ukuya kwi-100g ye-NPK Buffalo intloko 16-12-8-11+TE/root.
Kwimithi yepapaya kwiinyanga ezi-3 ukuya kwe-7 ubudala: Faka ixesha eli-1 ngenyanga, isixa sesichumisi sisuka kwi-100 ukuya kwi-150 grams ye-NPK Buffalo head 12-12-1-9+TE idityaniswe nokugrumba umhlaba emseleni.
Indlela yokuchumisa i-papaya: Nyibilikisa isichumiso emanzini abandayo, amanzi asuka kwingcambu 1 malunga ne-20 ukuya kwi-30cm. Ukukhula ngokukhawuleza kwepapaya, unokutshiza isichumiso esithe kratya samagqabi rhoqo kwiiveki ezi-3 ukuya kwezi-4.
Emva kokutyala i-papaya kwiinyanga ezi-2.5, baye baqhakaza kwaye babeka iziqhamo, kodwa xa umthi uthwala iziqhamo ezinzima, kuyimfuneko ukubeka isibonda ukukhusela umthi ukuba ungawi. Sika amagqabi amadala kufutshane nesiseko. Khupha umsele wokukhupha amanzi.
Susa lonke ukhula. Kuyimfuneko ukunciphisa ukulima ukuphepha umonakalo kwiingcambu zomthi. Ukunciphisa ukukhula kokhula, kuyimfuneko ukugubungela iingcambu ngotshani, kwaye ngexesha elifanayo, oku kunempembelelo yokugcina umswakama kunye nokuthintela ukuvuthwa kwezondlo.
Ukuthintela izinambuzane kunye nezifo ze-papaya
Ngexesha lokwenziwa iindlela zokutyala ipapaya kunzima ukuphepha izinambuzane kunye nezifo ezingena emthini kunye neziqhamo.
Nangona kunjalo, xa ufumanisa izityalo ezisulelekileyo, kufuneka ufumane ngokukhawuleza indlela yokutshabalalisa ukuphepha ukwenza umonakalo omkhulu emthini.
Udinga uncedo lwe-pesticides, ngezantsi zizifo ezihlala zivela kwimithi yepapaya kunye neziyobisi ezihambelana nesifo ngasinye.
Ungawathenga la mayeza kwiivenkile ezithembekileyo ezisebenza ngokusemgangathweni kwizinto zolimo.
Ngexesha lokukhula, i-papaya idla ngokusuleleka ngenani lezinambuzane ezifana ne-mealybugs, ooqongqothwane, izigcawu ezibomvu. Xa ubuninzi beentshulube emithini buphezulu, kunokwenzeka ukuba utshize i-Decis 2.5 ND (i-concentration ye-0.1%), i-Trebon (1%) ukuyitshabalalisa.
Ukuthintela i-virus ye-curl, kuyimfuneko ukusebenzisa amanyathelo okukhusela adibeneyo afana nalokhu: Ukusebenzisa okufanayo kunye nokuxhatshazwa kwezifo, ukusetyenziswa okulinganayo kwezichumisi ze-NPK. Akukhuthazwa ukutyalwa kwezityalo zepapaya ezimbini ezilandelelanayo kwintsimi enye.
Ukujikeleziswa ngokucokisekileyo nezityalo zamanzi. Kwizifo zebala elimthubi, i-powdery mildew, i-anthracnose … nceda uthintele kwangethuba xa isifo sisanda kwakhiwa, sebenzisa iziyobisi i-Daconil, i-Topsin okanye i-Zineb, i-Mancozeb yokutshiza.
Kuthatha ixesha elingakanani ukutyala ipapa ukuze uvelise iziqhamo?
Kwiimeko zokhathalelo olwaneleyo, ngokuqhelekileyo kuthatha malunga neenyanga ezi-2-3 ukuba i-papaya iqale ukudubula kunye nokuthwala iziqhamo. Emva kwenyanga enye, ipapaya inokuvunwa.
Nangona kunjalo, ukuba ukhathalelo alulungile, isichumisi asanelanga okanye umhlaba ungalunganga ukupheka, i-papaya iya kuthatha ixesha elide ukuthwala isiqhamo kunesiqhelo, isivuno siphantsi, kwaye umgangatho weziqhamo awuphezulu.
Uninzi lweentlobo ze-papaya zi-hermaphrodites, ngoko ke izinga lokumisela iziqhamo liya kuba phezulu, isiqhamo sihle, asikhuselekanga kwizinambuzane kunye nezifo, kwaye ayikhathaleli kakhulu kune-papaya yendabuko.
Vuna iziqhamo zepapaya
Kuthatha ixesha elingakanani ukulima ipapa? Abantu abaninzi basazibuza ngalo mba. Emva kokutyala i-papaya kwiinyanga ezi-7, sinokuqhubeka nokuqokelela iziqhamo kwimifuno eluhlaza, iinyanga ezili-9 zeziqhamo ezivuthiweyo ukuba zidle ezintsha.
Ukuba isiqhamo sivunwa ngenjongo yokutya okutsha, kufuneka kuqokelelwe xa amabala aphuzi akhanyayo okanye imivimbo ebumba emzimbeni (i-physiological ivuthiwe), emva kweentsuku ezimbalwa, isiqhamo siya kuvuthwa ngokupheleleyo, umgangatho uya kuba ngowona mkhulu.
Ukuba kuvunwe kwangethuba (isiqhamo esingekavuthwa ngokwasemzimbeni), incasa yesiqhamo iya kuba luthuthu, izondlo eziqulethwe kwisiqhamo ziyakuncitshiswa, incasa ayilunganga, ngokunjalo nexabiso lentengiso nalo liya kuncitshiswa.
Ngale ndlela yokukhulisa imithi yepapaya, isitiya sakho sepapaya siya kuvunwa unyaka wonke, isivuno esiphakathi singasuka kwi-70 ukuya kwi-120 kg/umthi/ngonyaka.
Ngoko siye safunda malunga iindlela zokutyala ipapaya Kanye kunye neendlela zokunyamekela umthi ukwenzela ukuba umthi we-papaya uhlale unempilo kwaye ukhula kakuhle.
Ngeli nqaku, i-Foo inethemba lokuba ungakhulisa eyakho imithi yepapaya ezele ziziqhamo ezisemgangathweni kwaye uzise umthombo omkhulu wezoqoqosho kusapho lwakho. Umnqweno omhle!